၎.၁.၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးည ပရီးမီးယားလိဂ်၂ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၄.၁.၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးည ပရီးမီးယားလိဂ်၂ပွဲ
၄.၁.၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးည ပရီးမီးယားလိဂ်၂ပွဲ
Posted by မောင် ပေ on Jan 4, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 12 comments
မင်္ဂလာပါ စာချစ်သူ စာဖတ်သူ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ ခင်ဗျာ ။
ကျုပ် တို့ မန်းတလေး ဂေဇက် ဒေါ့ကွန်း ဆိုတဲ့ ဝက်ဆိုက်ဂျီး ဟာ ဆိုရင်ဖြင့် သတင်း ၊ ပုလင်း ၊ ယမင်း ၊ သုတစွယ်စုံ ၊ ဝတ္ထုကဗျာ စုံစေ့နေအောင် ပြည့်စုံတဲ့ ဆိုက်ကြီး တစ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ လည်း မဖတ်ဖူးသူ တွေ ဝင်ကြည့်မိခဲ့ရင် ၊ ဖတ်ပီးရင်း ဖတ်ချင် ဖြစ်ကြတာပါ ။ ဖတ်ဖူးပီးသား လူတွေကြတော့ ကြိုက်ကြပြီး ဆက်တိုက် အားသလို အဆင်ပြေသလို ဖတ်ကြပါတယ် ။ အပြင်လောက က စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေ လည်း ဒီဆိုက်ထဲမှာ ဝင်ရေးနေကြသလို ၊ ကလောင်စမ်း ၊ လက်စမ်းတဲ့ ကျွန်တော် တို့ လို ဝါသနာရှင်များ ရဲ့ ကြိုးစားမှုများ ကို လည်း တွေ့ ရှိရမှာပါ ။
အို..စာကလဲ အင်ထရိုနဲ့ တင် တော်တော်ရှည်နေဘီ ။
ကျုပ် ဘောလုံးပွဲ အကြောင်းတွေ ရေးတယ် ။
ကျုပ် ဘောလုံး ပွဲ ပို့ စ် တွေ ကို သေချာဖတ်ရင် ဒီလို တွေ့ ကြရမှာပါ ။
“ အေဘီစီ အသင်းကိုဘဲ ရွေးခြယ်သင့်ပါတယ် ၊ ရွေးခြယ်ထားရင် မမှားပါဘူး ၊ ဒီပွဲကိုတော့ အေအသင်း ၁-၀ ဘီအသင်း လို့ ခန့် မှန်းထားပါတယ် ။ ခန့် မှန်းချင်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့် ဒီအသင်း ကို ကျုပ် ရွေးပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်များ ” အစရှိသဖြင့် ရေးခဲ့ပါတယ် ။
ကျုပ် က ဘောလုံးဝါသနာရှင် ၊ အပြင်မှာ ဘောလုံးဂျာနယ် တွေ လဲ ဖတ်တယ် ။ အကြိုက်တွေ့ တဲ့ဟာ ရှိသလို မကြိုက်တဲ့ဟာတွေ လည်း တွေ့ ရတာပေါ့ ။ နောက်ပိုင်းကြ ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘောပွဲရှိတဲ့နေ့ တိုင်းမှာ ဘောလုံး ဝက်ဆိုက်ပေါင်းစုံ မွှေနှောက်နေကြ ဆိုတော့ ၊ ဖတ်မိရတဲ့ အချက်တွေ သတင်းတွေ ကို စုပြီး ၊ ဘယ်အသင်း ကောင်းနိုင်တယ် ၊ ဘာကြောင့် ဆိုတာ ၊ တွေ့ သမျှ သိသမျှ လေးတွေ ကို ပြန်ရေးချင်လာတယ် ။
ဒါကြောင့် အင်တာနက် ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး မန်းဂေဇက် မှာ ရေးတယ် ဗျာ ။
ကျုပ် က အာဏာရှင် လည်း မဟုတ် ၊ ဘိုးတော် လည်း မဟုတ် ၊ ကျုပ် ဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ် လောက်စရာ ကောင်လည်း မဟုတ်သည့်အတွက် ၊
“ ငါ ပြောသလို လုပ်ရမယ် ” ဘယ်တုန်းက မှ မသုံးခဲ့ပါဘူး ။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ် ရွေးခြယ်ခွင့်ရှိပါတယ် ။
“ ငါ ရေးမှ ဖြစ်မယ် ” လို့ လဲ ဘယ်တုန်းက မှ မတွေးခဲ့ပါဘူး ။
စာဖတ်သူအားလုံး ကို ကျုပ် လေးစားပါတယ် ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ၊ အဲဒါလေး ကို သဘောပေါက်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကျုပ် ဘာကြောင့်ရေးနေသလဲ ဆိုရင် ၊ ကျုပ် စာ ကို ဝင်ဖတ်တဲ့ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ အတွက် အချက်အလက်လေးတွေ ကို ပြချင်တာရယ် ၊ ဒီပွဲအတွက် ဒီလို အခြေအနေ ရှိတယ် ဆိုတာ ကို ဝေမျှချင်တာပါဘဲ ။
လောင်းတဲ့သူ ကတော့ လောင်းမှာပါဘဲ ။ အဲ..လောင်းတဲ့သူ ဟာ ကျုပ် စာ ကို ဖတ်ပြီးမှ လောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ နောက်ပြီး လောင်းတဲ့သူ ဟာ ကျုပ် ခန့် မှန်းချက် အတိုင်းလဲ လောင်းချင်မှ လောင်းမှာပါ ။
အဓိက က ပွဲတစ်ပွဲ ကို ချည်းကပ်ရာမှာ ၊ ကန်ကြမယ့် အသင်းနှစ်သင်း ဟာ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာ ကို သိသွားရင် ကျုပ် ရေးရကျိုးနပ်ပါဘီ ။
အဲ မနေ့ ညက ကန်ခဲ့တဲ့ “ မန်စီးတီး ၃-၀ လီဗာပူး ” ပွဲအကြောင်း ကို ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် လေး ပြောချင်သေးတယ်ဗျာ ။
မနေ့ တုန်း က ကျုပ် တင်တဲ့ ပို့ စ်မှာ အစောပိုင်းက လီဗာပူး လို့ ခန့် မှန်းထားခဲ့ပေမယ့် ၊ မနေ့ ည ၈ နာရီကျော်တော့ ၊ စဉ်းစားရင်း..စဉ်းစားရင်းနဲ့ လီဗာပူး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး လို့ကောက်ချက်ချမိလာလို့ ၊ ပို့ စ် မှာ မန်စီးတီး ကို အားပေးကြပါ လို့ ထပ်ရေးခဲ့ပါတယ် ။
ကွန်မင့် ဖြင့်လည်း မန့် ခဲ့ပါတယ် ။
ဘာလို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြောင်းသွားရသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြရမယ် ဆိုရင် ၊ အာရှ ဘူကီ များ က ဖွင့်တဲ့ ကြေး က “ ဒဲ့ ” ဗျာ ။ အဲဒါ ကို ဘိရုမာ တွေ က မန်စီးတီး သရေရှုံး လို့ ဖွင့်လာတော့ ၊ အဲဒီအနေအထား က ဖိုက်တာများ ကို လီဗာပူး နေစေချင်တဲ့ သဘော ဖြစ်နေတယ် ။
လီဗာပူး က နေမယ် ဆိုရင်လည်း နေချင်စရာဘဲ ကိုး ၊ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ နယူးကာဆယ် ကို ၃-၁ နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ကစားထားတာ ဆိုတော့ ခြေတက်နေတယ် လို့ ထင်ကြ မြင်ကြမှာပါဘဲ ၊ လီဗာပူး သရေ ဆိုရင် အပြည့် မြတ် ပြီ ဆိုပြီး လီဗာပူး ကို ရွေးအောင် ဈေးက ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးဗျ ။
အဲဒီမှာ “မန်စီးတီး” စားတော့မယ် ဆိုတာ သေချာလာလို့ ၊ ပို့ စ်မှာ လာပြင်ရေးရတယ် ခင်ဗျ ။
ကျုပ် ကိုယ်တိုင်လဲ မန်စီးတီး ကို အားပေးပြီး ၊ မန်စီးတီး ပထမ ဂိုး သွင်းပြီးတဲ့ အထိ ပွဲကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေအထားမှာ လီဗာပူး က ၅၂% မန်စီးတီးက ၄၈% ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါ က မန်စီးတီးက ဘယ်ရီ ၇၃ မိနစ်မှာ အနီကတ် ပြခံရပြီး မှ လီဗာပူး က အနည်းငယ် ပြန်သာခဲ့တာပါ ။
အစ က ၅၀=၅၀ ပါ ။ မန်စီးတီး အတွက် အဂူရို က ပထမပိုင်း၁၁ မိနစ်မှာ အဖွင့်ဂိုး ကို သွင်းယူခဲ့ပြီး ၊ ၃၃ မိနစ် မှာ တော့ ယာယာတိုရေး က ဒုတိယ ဂိုး ကို သွင်းခဲ့ပါတယ် ။
ဒုတိယပိုင်း ၇၃ မိနစ်မှာ ဘယ်ရီ နှစ်ဝါ တစ်နီ နဲ့အထုတ်ခံရပြီး ၇၄ မိနစ်မှာ လီဗာပူး ပင်နတီ ဧရိယာထဲမှာ ဘောလုံးဖျက်တာ ကြမ်းလို့ မန်စီးတီး ပင်နတီ ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ၊ မီလ်နာ က အမှားအယွင်းမရှိ သွင်းယူခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၁၀ယောက် မန်စီးတီး ကို လီဗာပူး တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့သော်လည်း မန်စီးတီး ဂိုးသမား ဂျိုးဟတ် ရဲ့ အပိုင်သေချာ တဲ့ လက်စွမ်းပြမှုတွေကြောင့် ဂိုးမရခဲ့ဘဲ ၃-၀ နဲ့ ပွဲပြီးခဲ့ပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓဟူးည ပွဲတွေ အကြောင်း ပြောကြရအောင် ဗျာ ။
၂:၃၀ အဲဗာတန် (၁၁) – ဘော်တန် (၂၀)
။ နယူးကာဆယ် (၇) – မန်ယူ (၂)
အဲဗာတန် (၁၁) – ဘော်တန် (၂၀)
အဲဗာတန် ပရီးမီးယားလိဂ်၁၈ပွဲကန်အပြီး ၇ ပွဲနိုင် ၊ ၃ ပွဲသရေ ၊ ၈ ပွဲရှုံး ၊ ရဂိုး၁၉ ပေးဂိုး၂၀ ၊ ၂၄မှတ်
ဘော်တန် ပရီးမီးယားလိဂ်၁၉ပွဲကန်အပြီး ၄ ပွဲနိုင် ၊ ၁ ပွဲသရေ ၊ ၁၄ ပွဲရှုံး ၊ ရဂိုး၂၃ ပေးဂိုး၄၂ ၊ ၁၃မှတ်
အဲဗာတန် ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့သောငါးပွဲမှာ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ ရှုံး
ဘော်တန် ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့သောငါးပွဲမှာ သရေ ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး
အဲဗာတန် အိမ်ကွင်းတွင် ဘော်တန် နှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
၁၀.၁၁.၂၀၁၀ အဲဗာတန် ၁-၁ ဘော်တန်
၂၀.၃.၂၀၁၀ အဲဗာတန် ၂-၀ ဘော်တန်
အဲဗာတန် အသင်း ၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
ဂိုး Tim Howard
နောက် Leighton Baines, John Heitinga, Phil Jagielka, Phil Neville
လယ် Royston Drenthe, Marouane Fellaini, Leon Osman, Jack Rodwell, Tim Cahill
ရှေ့Louis Saha
ဘော်တန် အသင်း ၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
ဂိုး Jussi Jaaskelainen
နောက် Paul Robinson, Zat Knight, Gary Cahill, Sam Ricketts
လယ် Chris Eagles, Fabrice Muamba, Nigel Reo-Coker, Martin Petrov
ရှေ့Kevin Davies, Ivan Klasnic
ဈေးအနေအထားအရ အဲဗာတန် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ခပ်ပါးပါးဆုံးရှုံးမည် ဖြစ်သည် ။
အဆင့်၂၀နေရာကနေ အသည်းအသန် ရုန်းကန်နေတဲ့ ဘော်တန် ဟာ ရုန်းလေနစ်လေ ဖြစ်နေပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ခြေစွမ်းတက်နေတဲ့ ဝက်ဘရွန်း ကို သူ့ ကွင်းမှာ ၁-၀ အနိုင်ကစားခဲ့ပါတယ် ။
ဘောက်ဆင်ဒေးကနေစလို့ ရက်အများကြီးမခြားဘဲ ဆက်တိုက်ကစားနေကြတဲ့ နှစ်သင်းလုံးဟာ ပွဲပန်းတဲ့ဒဏ် ကို ခံကြရမှာပါဘဲ ။
သည်ပွဲကို ဘယ်အသင်းရွေးခြယ်ရမှန်း မသိလို့ ၊ ဂိုးပေါင်းဘက် ကို စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ် ။
သူတို့ နှစ်သင်း တွေ့ ဆုံခဲ့မှု များ ကို ပြန်ကြည့်ရင် နှစ်သင်းစလုံး သွင်းဂိုး ၂ ဂိုး ထက် များတဲ့ ပွဲနည်းတာမို့ ၊ ဂိုးပေါင်းအောက် ကို ရွေးခြယ်လိုက်ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် (၇) – မန်ယူ (၂)
နယူးကာဆယ် ပရီးမီးယားလိဂ်၁၉ပွဲကန်အပြီး ၈ ပွဲနိုင် ၊ ၆ ပွဲသရေ ၊ ၅ ပွဲရှုံး ၊ ရဂိုး၂၆ ပေးဂိုး၂၅ ၊ ၃၀မှတ်
မန်ယူ ပရီးမီးယားလိဂ်၁၉ပွဲကန်အပြီး ၁၄ ပွဲနိုင် ၊ ၃ ပွဲသရေ ၊ ၂ ပွဲရှုံး ၊ ရဂိုး၄၉ ပေးဂိုး၁၇ ၊ ၄၅မှတ်
နယူးကာဆယ် ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့သောငါးပွဲမှာ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ သရေ ၊ ရှုံး
မန်ယူ ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့သောငါးပွဲမှာ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင်
နယူးကာဆယ် အိမ်ကွင်းတွင် မန်ယူ နှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
၁၉.၄.၂၀၁၁ နယူးကာဆယ် ၀-၀ မန်ယူ
၄.၃.၂၀၁၀ နယူးကာဆယ် ၁-၂ မန်ယူ
နယူးကာဆယ် အသင်း၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစားသမားများမှာ
နောက် Simpson, Coloccini, Williamson, Santon
လယ် R Taylor, Cabaye, Tiote, Jonas
ရှေ့Best, Ba
မန်ယူ အသင်း၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစားသမားများမှာ
ဂိုး De Gea
နောက် Rafael, Smalling, Jones, Evra
လယ် Valencia, Carrick, Park, Nani
ရှေ့Rooney, Welbeck
ဈေးအနေအထားအရ မန်ယူ တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် တစ်ဝက်ကျော် အမြတ်ရမည် ဖြစ်သည် ။
မနေ့ ည က မန်စီးတီးက လီဗာပူး ကို နိုင် သွားပြီ ဖြစ်လို့ ၊ ဒီပွဲ ကို မန်ယူ အနိုင်ကစား မှာပါ လို့ စဉ်းစားချင်စရာပါဘဲ ။
တစ်ကယ်လို့မန်ယူ သရေဆိုရင် ၂ မှတ် ကွာမယ် ၊ ရှုံးရင် ၃ မှတ် ကွာမယ် ။ အနိုင်ကန်ရင်တောင် ဂိုးကွာခြားချက် ရှိနေလို့ အဆင့်(၁) ကို မရနိုင်သေးဘူး ။
နယူးကာဆယ် ဒီရာသီ အိမ်ကွင်း ၉ ပွဲ ကစားခဲ့တာမှာ ၄ နိုင် ၊ ၃ သရေ ၊ ၂ ရှုံး
မန်ယူ ဒီရာသီ အဝေးကွင်း ၉ ပွဲ ကစားခဲ့တာမှာ ၇ နိုင် ၊ ၂ သရေ ၊ ၀ ရှုံး
မနှစ်က ဂိုးမရှိ ရလဒ်ကို ခဏမေ့ပြီး အခြား အချက်များ ယှဉ်ရင်ကို မန်ယူ ကို နယူးကာဆယ် ဘာမှ ယှဉ်လို့ မရပါဘူး ။
နောက်ပြီး မန်စီးတီး နဲ့ အမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက် ခြင်း ယှဉ်ဖို့ အတွက် မန်ယူ တိုက်စစ်ဖွင့်လာတာ ကို မြင်ရမယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။
လာမယ့် တနင်္ဂနွေ နေ့ မှာ ၊ အက်ဖ်အေ ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ်အဖြစ် မန်စီးတီး ကွင်း မှာ မန်ယူ သွားကန်ရမှာပါ ။ ဆိုတော့က ဒီပွဲ ကို အနိုင်ကစားပြီး မန်ယူ ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓါတ် ကို “ဖာဂူဆန်” မြှင့်မယ့် သဘောရှိနေပါတယ် ။
““ မန်ယူ ”” နိုင်မယ် ၊ ဘယ်နှစ်ဂိုး သွင်းမလဲ ဆိုတာကတော့ ၊ ဖာဂူဆန် ရဲ့ သဘောထား ကို ဘဲ စောင့်ကြည့်ရမယ် လို့ ပြောခွင့်ပြုပါ ။
ကာဆယ်ကို အသာဟယ်ဟု ဖာဂူဆန်က သာကူဆန်ကို မသောက်ဘဲ
လာဟယ် ကာဆယ် သွင်းမယ်ဟေ့ အမ်မီရိုဘီ (၁)လုံး
ကာဆယ် 1-2 မန်ယူ လို့သာ ….
အာရှတင်မက ဥရောပက ပျိုမဒီများအကြိုက်
အာရှ တင် မက ဥရောပ က ပါ ပါသတဲ့
အို ဘာတဲ့ အမြှောက် ကို နှံပြည်စုတ် နဲ့ ပစ်သလို မျိုး
မျက်လုံးထဲ မြင်နေတယ် နော….
တစ်ခြားမထင်နဲ့ စိတ်နော် …
အာဖရိကန် နစ်ကာမဒီလေးတွေ က
မောင်ကင်း ကို သေးတယ် မထင်နဲ့ တဲ့
သူ့ ဟာ က XL ဂျီးတဲ့
ကဲ ( ၀-၃ ) မန်ယူကွ
မင်္ဂလာဘာဘောချစ်သူ အပေါင်းတို့ 
ကျနုပ် ဘောမောင်ပေဟာဆိုလျင်ဖြင့် မန်းလေးမြို့ ၊ဘောရပ်ကွက်၊ဘောလမ်းမှာ ငယ်စဉ်တောင်ကျီး
ခလေးဘ၀ကတဲက ဘောနဲ့ ယဉ်ပါးလာခဲ့သဖြင့် ဘောသုံးလုံးကြေ ဘောဂုရုကြီး မဟုတ်.တဟုတ်..
နိုင်ရင် ပျော့ဆတ်ကို လိုက်ပို့ ပါ..ရှုံးရင် ကိုယ့်ဘာသာစိုက်ပေးလိုက်ပ
ကိုပေါက်ဖော်ကြီး. ပြောတဲ့ ပျော့ဆတ်ဆိုတာ ခုမှပေါ်လာတာနေမှာ။ဟဲဟဲ ကိုမောင်ပေ ကဘောလုံးဝါသနာအိုး
အဲဗာတန် အိမ်ကွင်း တွင် ဘော်တန် နှင့် ကန်ခဲ့သော ရလဒ်များ
၄.၃.၂၀၁၀ အဲဗာတန် ၂-၀ ဘော်တန်
၇.၂.၂၀၀၉ အဲဗာတန် ၃-၀ ဘော်တန်
၂၆.၁၂.၂၀၀၇ အဲဗာတန် ၂-၀ ဘော်တန်
၁၈.၁၁.၂၀၀၆ အဲဗာတန် ၁-၀ ဘော်တန်
၁၇.၁၂.၂၀၀၅ အဲဗာတန် ၀-၄ ဘော်တန်
နယူးကာဆယ် အိမ်ကွင်း တွင် မန်ယူ နှင့် ကန်ခဲ့သော ရလဒ်များမှာ
၁၉.၄.၂၀၁၁ နယူးကာဆယ် ၁-၁ မန်ယူ
၂၃.၂.၂၀၀၈ နယူးကာဆယ် ၁-၅ မန်ယူ
၁.၁.၂၀၀၇ နယူးကာဆယ် ၂-၂ မန်ယူ
၂၈.၈.၂၀၀၅ နယူးကာဆယ် ၀-၂ မန်ယူ
၁၄.၁၁.၂၀၀၄ နယူးကာဆယ် ၁-၃ မန်ယူ
New Castle 3:0Man U
ပထမပိုင်း ၄၅ မိနစ် အချိန်ပို ၂ မိနစ်
ဒုတိယပိုင်း ၄၅ မိနစ် အချိန်ပို ၄ မိနစ် ကစားပြီး သကာလ
မန်ချက်စိန် ယူနှပ်ထွက် သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အားပေးသူများနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ပရိသတ်များအား
ပြင်းထန်စွာ နှိပ်စက် သွားချေပြီ တကား
ဒီလိုမှန်းသိ ၊ အဘိုးဂျီး ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ မှာ ဟက်ပီးဘက်ဒေး မလုပ်ပါဘူးဗျာ
အခုတော့ လစ်သွားရှာပေါ့ ….
ဖာဂူဆန် ရေ အမျှ အမျှ အမျှ